Sidee loo kordhiyaa tirada xiriirrada dibadda?
Backlinks ayaa ah calaamadaha ugu muhiimsan ee tayada ilaha webka, ku habboon, iyo awoodda. Waxay muujiyaan Google haddii ay u baahan tahay in lagu barbar dhigo boggan TOP ama maahan. Xidhiidhada dibadda ee sareeya waxay si toos ah u saameynayaan goobtaada natiijooyinka raadinta. Si kastaba ha ahaatee, ma fududa in la helo juice juice laga helo boggaga internetka sare haddii aad ku cusub tahay suuqa dijitalka ah. Wixii websiyo yar yar ama dhawaan la sameeyay, dib u dhiska dib u dhiska wuxuu u muuqan karaa mid aad u adag, iyada oo dhammaan dariiqooyinka loo yaqaan "fudud oo deg deg ah" ay ka hor imaanayaan xeerarka Google waxayna keeni kartaa in hoos loo dhigo. Intaa waxaa dheer, haddii aad dhisayso xiriiro hab aad u aragto shakiga mashiinnada raadinta, waxaad halis ugu jirtaa helitaanka ganaaxyada Google.
Maanta, waxaan ka hadli doonaa doorka lambarka backlinks ee horumarinta ganacsiga online iyo ka hadal farsamooyinka qaar ka mid ah waxaad ka heli kartaa casiir dheeriga ah la isku barto.
Maxaad ugu baahan tahay backlink?
Guud ahaan, backlink waa marka xiriir kale oo shabakad ah ee boggaaga. Haddii websitekani leeyahay qiimo u gaar ah dadka isticmaala loona tixgeliyo sida matalaadaha matoorada raadinta, xiriirada laga helay waxay keeni doontaa gaadiidka tayadaada ee goobta. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad isku xirto spamka, ilaha webka ee dhawaan la ciqaabay, fursadda aad u heli lahayd juice link waa mid aad u hooseeya. Xidhiidhada tayada badani waxay tilmaamayaan boggagaaga, awooddaada badan ee aad ka heli doonto matoorada raadinta.
Waa inaad ka warqabtaa ujeedooyinka kala duwan ee xiriirada dibadda ah markaad ka heli doonto natiijooyin kala duwan nooc kasta oo gadaal. Xidhiidhadu way kala duwan yihiin waxayna ku xiran tahay xaqiiqda haddii aad tahay mid isku xiraya ama lala xiriirayo.
Backlinks ayaa baabuur u diraya goobtaada
abuurista olole tayo dhisid oo tayo leh, waxaad ka heli kartaa taraafikada ilaha kale ee internetka sida isticmaalayaasha akhri boostada adigoo riixaya macluumaad dheeraad ah.
Backlinks waxay awood u siisaa goobtaada
Backlink waxay u adeegtaa sida codbixinada kale ee bloggers waxayna u sheegeysaa makiinadaha raadinta ee ku saabsan sumcadda iyo awooda Your domain. Waxay si fiican u adeegtaa sidii hagaajinta ujeedka aqoonsigaaga.
Markaad isku xirto boggaaga oo tixraacaya domain kale, milkiilahaas waxay ogaan doonaan macluumaadkaan iyada oo la adeegsanayo farsamadiisa falanqaynta (f. e. Falanqaynta Websaytka ah ama Google Analytics). Waa fursad aad ku heshid si aad u hesho ilo kale oo ku xiran shabakadda si aad u ogaato xariirkaaga iyo inaad la sameysid xiriir ganacsi oo wanaagsan.
Sidee loo kordhiyaa tirada dhabarka?
Si aad dib ugu noqotid asal ahaan, waxaad u baahan tahay inaad sameyso waxyaabo gaar ah oo xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, dhammaan mulkiilayaasha website-yada leh waxay abuuraan tayo tayo leh, waxaana laga yaabaa inaad lumiso maqaalada kale. Waxaad isku dayi kartaa in aad soo dhawaato ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah adigoo ku qeexan mawduuc yar oo ka duwan kuwa kale. Haddii aad ku siin karto dhagaystayaasha aad ku mashquulsan tahay wax cusub, markaa dadka isticmaala inta badan waxay la wadaagi doonaan midba midka kale iyo sidoo kale kuwa kale ee bloggers waxay noqon doonaan kuwo xiiso leh oo ku saabsan astaantaada.
Si aad ula xiriirto barta kale ee blogga waa fursad fiican oo aad dib ugu soo laabato naftaada sababtoo ah waxaad ka heleysaa radar kuwan blogs ah. Markaad xiriir la leedahay dadka kale, waxaad u badan tahay inaad heshid saamiyo, isku-xidh, iyo dhiirrigelin dabiici ah Source .